कतार रोजगारीमा जाने हरुलाई सुबर्ण अबसर । न्युनतम मासिक तलब १ लाख ३८ हजार माथि - बैदेशिक पोष्ट
कतार रोजगारीमा जाने हरुलाई सुबर्ण अबसर । न्युनतम मासिक तलब १ लाख ३८ हजार माथि
माघ ३, २०७८ १२;३१ मध्यान्ह प्रकाशित
काठमाडौँ । कतारको बहुप्रतिष्ठित कम्पनि Hassan Al Hammadi Contracting and Trading Company Qatar मा नेपाली पुरुष कामदारको माग गरेको छ । यी कम्पनीले बिभिन्न पोस्टका लागि २७ जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो । न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ ।
कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । न्यूनतम तलब नेपाली रु. ३३,०३०/- देखि १,३८,७२६/- सम्म रहने कम्पनीको डिमाण्ड लेटर मा उल्लेखित छ ।
तलब खान बस्न सहित १ लाख ३८ हजार माथि रहेको छ । इच्छुक कामदारले नेपाल लाइफ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी प्रा. लि. को कार्यालय गौशाला, काठमाडौँमा माघ १० गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।
कतारमा नेपाली कामदारका लगि वैदेशिक रोजगारको अवसर, मासिक तलब तथा सेवासुविधा कस्तो ?
फाल्गुन १४, २०७८ २१;५६ मध्यान्ह प्रकाशित
जापानले माग्यो नेपाली कामदार, मासिक तलब एक लाख ७४ हजार बढि
फाल्गुन ६, २०७८ ११;४७ बिहान प्रकाशित
वैदेशिक रोजगारीका लगि विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? साइप्रसले माग्यो नेपाली पुरुष महिला कामदार ?
माघ २९, २०७८ ०७;४३ बिहान प्रकाशित
आज २८ माघ २०७८ शुक्रवार को राशिफल, सिंहलाई मित्रबाट सहयोग, धनुलाई सोचेअनुसार हुने
माघ २८, २०७८ ०७;१२ बिहान प्रकाशित